Imibuzo evame ukubuzwa - i-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd.
Ama-portal ozimele. Amafreyimu ama-portal ngokuvamile ayizakhiwo eziphansi, ezibandakanya amakholomu kanye nemishayo evundlile noma egxotshiwe, exhunywe ngokuxhuma okumelana nomzuzwana ... Leli fomu lohlaka lohlaka oluqhubekayo luzinzile endizeni yalo futhi linikeza ubude obucacile obungavinjelwe ukubopha.
Uhlaka lwensimbi luyindlela yokwakha ene "skeleton frame" yamakholomu wensimbi amile kanye nama-I-beams avundlile, akhiwe ngegridi elingunxande ukuxhasa phansi, uphahla nezindonga zesakhiwo konke okunamathiselwe kuhlaka. Ukuthuthuka kwale ndlela kwenza ukwakhiwa kwesakhiwo esikhulu kubekhona.
Ngoba isakhiwo sensimbi sinezinzuzo eziningi. Okokuqala, amandla aphezulu. Isilinganiso esiphakeme samandla kuya kwesisindo (amandla ngesisindo ngasinye). Okwesibili, ukumelana okuhle kakhulu nokumelana nokuzamazama komhlaba. Melana nokukhubazeka okubanzi ngaphandle kokuhluleka ngisho nangaphansi kwengcindezi ephezulu yokuqina. Okwesithathu, ukuqina, ukufana kwezinto ezibonakalayo. Ukuqagela kwezakhiwo, eduze nokucabanga kokuklanywa. Okwesine, ukukhululeka kokuqamba nokushesha kokwakhiwa.
Ukuvimbela kanjani uphahla lwensimbi nokuvuza kodonga lwensimbi yokusebenzela?
Indlela enhle yokumisa ukuvuza kungakaqali. Nakhu ukuthi ungamisa kanjani uphahla lwensimbi nokuvuza kodonga:
1. Khetha ikhithi yokwakha yensimbi esezingeni eliphakeme. Zonke izinhlelo zokwakha zensimbi azidalwanga zilingana. Izinhlelo zokwakha zensimbi ze-RHINO, ngokwesibonelo, zifaka izici eziningana zokuvimbela amanzi ezenzelwe ukugcina isakhiwo sakho singenazinkinga.
Okokuqala, ifreyimu yethu yensimbi eqinile yokuhweba ivikela ekulimaleni ezimvula ezinkulu kanye neqhwa.
Okwesibili, i-RHINO ifaka ama-panels aphezulu we-26-gauge purlin bearing rib (PBR) ephakethe elijwayelekile, ngaphandle kwentengo eyengeziwe. Amaphaneli we-PBR ahlinzeka ngamandla amakhulu nokugqagqana okujulile phakathi kwamapaneli, kwesikhumba esiqinile kakhulu sokwakha kunama-R-panels amancane asetshenziswa yizakhiwo zensimbi ezishibhile.
Okwesithathu, i-RHINO ifaka i-top-of-the-line, i-self-drilling, izikulufo ezingamelana nokugqwala ngama-washer ahlala isikhathi eside ukuvikela ukubekwa uphawu okwengeziwe.
2. Faka izikulufo kahle. Akunasistimu yokuvala evala kahle ngaphandle kokuthi izikulufo zifakwe kahle.
Okokuqala, izikulufo kufanele zishaye ukubiyela kwensimbi okungezansi. Uma isikulufa siphuthelwa yi-purlin noma i-girt, i-washer ayivali, futhi ukuvuza akunakugwenywa.
Okwesibili, ukuvikela ukuvuza kwezikulufo zokuzibhola okunamathisela uphahla lwensimbi namaphaneli odonga kumele kubhodwe kuqonde, hhayi okugwegwile.
Okwesithathu, ngezikulufo ezinama-washer kufanele kubhodwe kuze kube ekujuleni okulungile. Uma uphawu ludlulele, ukucindezelwa ngokweqile kungavuza. Uma ingaqiniswanga ngokwanele, iwasha ayakhi uphawu oluqinile, futhi ingavuza.
Lapho zifakwe kahle futhi zigcinwa kahle, izinto zokubopha zeRHINO akufanele neze zivuze.